Nahintsana tamin’ny Amboaran’i Afrika i Togo taorian’ny fanafihana nahafatesana olona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2020 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, বাংলা, Deutsch, Español, English
Nihintsana tamin'ny fomba ofisialy amin'ny CAN ny ekipam-pirenen'i Togo taorian'ny fanafihana mahafaty olona nahazo ny zotran'ny ekipam-pirenena tamin'ny zoma talohan'ny fotoana nanoratana tao Cabinda, faritra iray ao Angola voasaritaky ny herisetram-pisintahana hatry ny ela.
Ekipam-pirenena Togoley mialoha ny ny lalao fanomanan-tena tao Biberach/Riss andro vitsy talohan'ny Mondialy (Loharano: Wikipedia)
Maty ny mpanampy ny mpanazatran'ny ekipa sy ny misahana ny fifandraisana amin'ny fampitam-baovao ary naratra mafy kosa ny mpiandry harato Kodjovi “Dodji” Obilale. Nolazaina fa efa tsy dia maninona intsony i Obilale rehefa nanaovana fandidiana tao Afrika Atsimo, na dia mbola miaina ampian'ny respirateur aza.
Nanondro tao amin'ny fanambaràna iray ny FLEC, ilay vondrona mpioko nilaza ho tompon'andraikitra tamin'ity fanafihana ity fa ny polisy niaraka tamin'ny zotra no nokendrena fa tsy ny mpilalao Tôgôley. Nilaza ny fanafihana ho “tranga maningana” kosa ny governemanta Angôley, ary niantoka ny fiarovana ireo ekipa hafa. Mbola mitohy araka ny efa nokinasa kosa ireo lalao tontosaina ao amin'ny faritanin'i Cabinda.
Raha maro amin'ireo mpilalao no mbola te-hilalao, araka ny tati-baovao, dia nampody ny ekipa kosa ny governemanta Tôgôley ny Asabotsy. Nihintsana tamin'ny fomba ofisialy i Tôgô, raha tokony nifanandrina tamin'i Ghana saingy tsy nipoitra.
Hatramin'ny nisian'ny fanafihana, maro amin'ireo Togoley no nanana fanontaniana saro-baliana amin'ny hoe inona ny voina azo sorohina: Nahoana no nandeha bus ny ekipa fa tsy nandray fiaramanidina? Nisafidy ny hampisy lalao maromaro tao Cabinda ve ny governemanta angôley ho fanaporofoana fa efa tsy misy intsony ny fiokoana? Mendrika hizaka izao voina manaraka azy izao ve ny football? Tokony hofoanana ve Amboara?
Vantany vao nisy ny fanafihana, dia nisy ny adihevitra lehibe antserasera amin'ny hoe tokony hiala ve i Tôgô sa tsia. Nandresy lahatra ny hafa ny Rêve d'Afrique, bilaogin'ny mpanoratra Tôgôley Gerry Taama, fa tokony hitohy ny lalao:
Raha tsy hoe foanana ny CAN (raha manapakevitra ny hanao ankivy ny lanonana ny ekipa hafa), dia tokony hilalao ihany isika…Tsy maintsy ho ao amin'io CAN io isika, haka ny toerantsika, hanaja ny maty ao amintsika, haneho ny fitiavantsika azy ireo, ary hitsipaka amin'ny hoe maty amin'ny tsy misy dikany ry zareo. Milalao mba tsy handresen'ny mpampihorohoro, mba tsy ho ny fahatsimifaditrovana no handrombaka manoloana ny lalàna sy ny soatoavintsika. Milaza fibabohana ny fandavana tsy hilalao…
Tsy mitovy hevitra amin'izany i Yipka-Au Village:
Ahoana moa no hanantenana fa hilalao baolina ry zareo raha tsy azon'ny fahafatesana tamin'ny fotoana handeha hilalao baolina, sady misy mpialalao sy mpanazatra sy mpitsabo maratra??
Manaiky i Kangi Alem, ary mandeha ho any amin'ny dingana manaraka, mandresy lahatra amin'ny tokony hanafoanana ny CAN 2010:
Ny CAF [Confederation of African Football] no tompon'andraikitra amin'ny fampilalaovana ny ekipa tôgôley any amin'ny faritra malaza ho mampididoza, tokony handray ny andraikiny ihany koa ny CAF amin'ny hanafoanana ny CAN 2010! Izay no fahatsapako, mety ho anti-sport angamba fa izay.
Nilaza ny CAF fa tsy mahalala izay zotra andehanan'ny ekipa ary efa nanolo-kevitra ny ekipa izy handray fiaramanidina. Mahita izany ho hafahafa i Alem satria niaraka tamin'ny ekipa ny valalamanjohin'ny tafika, izay fahatsarampo avy amin'ny governemanta angôley.
Nahoana no milalao any Cabinda?
Mazava loatra fa ny fanontaniana lehibe dia ny hoe nahoana moa ny lalao no tontosaina any Cabinda aloha. manoratra i Yikpa:
Mihevitra aho fa fanapahan-kevitry ny governemanta angôley, nankatoavin'ny CAF, ny nanomana lalao tao amin'ny faritr'i Cabinda ho fanaporofoana fa azo atao ny fiarovana ao amin'io faritra io, manankarena solika, mba hanintonana mpampiasa vola ao amin'io faritra io. Noporofoin'ny fanafihana ny mifanohitra amin'izany.
Manoratra i Paul Archer, ao amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratr'i Alem:
Tsy maintsy milalao, izay ny fiainana, any aminy ny mpioko, tsy ekeko ny ataony fa rehefa sahan'ady dia sahan'ady.
Fanatanjahantena sy voina
Manamarika i David Kpelly, raha manoratra ao amin'ny bilaogin'i Alem, fa tsy vao sambany ny fanatanjahantena, indrindra fa amin'ny football, no tafaharo amin'ny herisetra. Tamin'ny taona 2007, mpikambana miisa 13 avy ao amin'ny manampahefanan'ny fanatanjahantena sy ny mpijery, ao anatin'izany ny minisitry ny fanatanjahantena no maty tao Sierra Leone tamin'ny fianjeran'ny angidimby iray. Nanamarika ihany koa izy fa taorian'ny lalao iadiana ny toerana ho tafita amin'ny Amboaran'ny Afrika 2006 nifanandrinan'i Togo sy i Mali, dia maro ny Togoley maty tao Bamako. Nomarihany ihany koa ny tranga tao amin'ny kianjaben'i Kegue ao Lome izay nahafatesana mpiondana football maro, ary tsy tonona intsony ny voina nitranga vao haingana tao Cote d'Ivoire, 19 ny isan'ny mpijery maty tao anatin'ny fifanosehana. Nanao fehinteny izy:
Eto Afrika, ny football, ny football hatrany no tsy vitsy ny lasibatra, …Andrekaky ô! be loatra ny lasibatra ataon'ny football!
Mitovy amin'izany ihany koa ny mpamaky iray, Sami, manontany tena amin'ny herisetra mihodidina azy ireo indraindray, “Tsy sahan'ady novaina endrika ny fanatanjahantena tiam-bahoaka mamelona ireo fahatsapana nasionalista bibibiby” [Fr].
Mandeha ny lalao
Felix Makayaba, ao amin'ny fanehoan-kevitra iray ao amin'ny Reve d'Afrique, midradradradra amin'ny fahatsapana fa mitohy ny Amboaran'i Afrika, efa nanadino sahady an'ilay voina izao tontolo izao, ary hatramin'ny mpijery ao Togo aza:
Mitohy ny CAN ary dia hisy rivo-pety hatrany manerana an'i Togo. Ary ahiana ho takon'ny foot ny fangirifiriana tamin'ny fahafatesan'ny tato amintsika. Ary ataoko ho porofo ny hiakia-pifaliana re manerana an'i Lome tamin'ny fahazoana ady sahala baolina 4 nataon'ny ekipa Maliana. Ary efa eo amin'ny toeran'ny rahalahiny Maliana sahady ny vahoakan'i Lome…Ary efa tsy miraharaha loatra ny maty tany Angola izay tsy mbola voalevina akory isika.
Angamba efa voajanahary eo amin'ny toetran'olombelona fa na dia eo aza ny famoizana mampihoronkoditra, dia mitohy ny fiainana. Mamariparitra ny fahatsapam-pety niainana tao Bamako talohan'ny lalao nifanandrinan'i Mali sy Angola (izay nifarana tamin'ny ady sahala 4-4) i Fasokan.
Rahalina, hifanandrina amin'i Angola i Mali. Lanonambe ity ao Mali ary efa tsapa sahady izany amin'ny alalan'ny saina mihofahofa amin'ny môtô, bisikileta, fiara, amin'ny fitoeran'entana sy eny ambony tafo atsatoky ny mpanohana. Io ihany izao no resaka ifanaovana manerana an'i Bamako.
Mety hahita ireo lehilahy miakanjo maitso, mavo, mena ianao sy vehivavy manao sarondoha ny saina mba hilazana amin'ny Voromaherin'i Mali fa manohana azy ireo ny rehetra.